Decent စျေး - အွန်လိုင်း DCT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Decent (DCT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Decent (DCT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Decent ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $847 939.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Decent တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Decent များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DecentDCT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00659DecentDCT သို့ ယူရိုEUR€0.00562DecentDCT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00506DecentDCT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00605DecentDCT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0595DecentDCT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0419DecentDCT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.147DecentDCT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0248DecentDCT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00878DecentDCT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00925DecentDCT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.148DecentDCT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0511DecentDCT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0354DecentDCT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.492DecentDCT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.12DecentDCT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00906DecentDCT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0101DecentDCT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.205DecentDCT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0458DecentDCT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.703DecentDCT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.81DecentDCT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.56DecentDCT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.483DecentDCT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.183
DecentDCT သို့ BitcoinBTC0.0000006 DecentDCT သို့ EthereumETH0.00002 DecentDCT သို့ LitecoinLTC0.000123 DecentDCT သို့ DigitalCashDASH0.00008 DecentDCT သို့ MoneroXMR0.00008 DecentDCT သို့ NxtNXT0.537 DecentDCT သို့ Ethereum ClassicETC0.000981 DecentDCT သို့ DogecoinDOGE1.98 DecentDCT သို့ ZCashZEC0.00008 DecentDCT သို့ BitsharesBTS0.255 DecentDCT သို့ DigiByteDGB0.219 DecentDCT သို့ RippleXRP0.0236 DecentDCT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000231 DecentDCT သို့ PeerCoinPPC0.0221 DecentDCT သို့ CraigsCoinCRAIG3.05 DecentDCT သို့ BitstakeXBS0.286 DecentDCT သို့ PayCoinXPY0.117 DecentDCT သို့ ProsperCoinPRC0.84 DecentDCT သို့ YbCoinYBC0.000004 DecentDCT သို့ DarkKushDANK2.15 DecentDCT သို့ GiveCoinGIVE14.49 DecentDCT သို့ KoboCoinKOBO1.53 DecentDCT သို့ DarkTokenDT0.00607 DecentDCT သို့ CETUS CoinCETI19.33